Guddi farsamo oo wada hadala dowlada federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo la magacaabay ‘sawirro’ | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Guddi farsamo oo wada hadala dowlada federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo la...
Guddi farsamo oo wada hadala dowlada federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo la magacaabay ‘sawirro’
Waxaa maanta howshoodii billaabay guddiyo farsamo oo ka soo shaqeynaya sii ambaqaadista wahadallada bilowga ah ee u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda goonni isutaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland.
Guddiyadan ayaa lagu wadaa inay sii ambaqaadaan wadahallada bilowga ah ee shalay Jabuuti ka furmay.
Warsaxaafadeed ay shaacisay Villa Somalia ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyey munaasabadda daah furka go’aamadii shirka uu u rajeeyey in shirkani uu guul, walaaltinimo iyo wax wada qabsi ku soo gaba-gaboobo.
“Shirkan inshallaah waxaan rajaynaynaa in uu noogu dhammaado guul oo aan uga farxinno shacabkeenna Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, waxaan ka hadlaynaa sidii loo walaaloobi lahaa, wax loo wada qabsan lahaa, si dhab ah loo wada hadli lahaa, soddon sano waan wada joognay, soddon sano waan kala maqnayn, soddonka sano ee soo socda caruurteenna maxaan uga tagnaa oo dhaxal?”
Shirkan oo ay marti gelinaysay dowladda Jabuuti ayaa waxaa ergada labada dhinac kala hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cadi.
War-murtiyeed laga soo saaray shirkaasi ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyay in la sameeyo guddi farsamo oo wada jir ah, kuwaas oo hawsha halkaa ka sii wadi doona isla markaana dib u eegi doona waxyaabaha horey loogu heshiiyay, in labada dhinac aanay siyaasadeyn kaalmooyinka horumarineed iyo maalgashiga iyo in dalka Jabuuti uu noqdo madasha kulammada dhanka farsamada ee lagu sii dhaqaajinayo wada hadallada.